Safaaradda Mareykanka ee Ciraq oo soo saartay digniin deg deg ah – Hornafrik Media Network
Safaaradda Mareykanka ee Ciraq oo soo saartay digniin deg deg ah
By Liibaan Nuur	 On Jan 4, 2020
Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa ku boorisay dhammaan muwaadiniinteeda inay si deg deg ah uga baxaan Ciraaq.
Arrintaan ayaa timid ka dib markii Mareykanku duqeyn ku dilay madaxii ilaalada kacaanka Iran Qasim Soleimani iyo Taliyihii malleeshiyaadka Ciraaq Abu Mahdi Al-Muhandis.
Xiisadaha sii kordhaya ee ka jira Ciraaq iyo gobolka, Safaaradda Mareykanka waxay ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan goobaha ay ka joogaan dalka Ciraaq, waxaana sii kor dhaya cabsida laga qabo inay kooxaha taageera Iran ka aar goostaan Ameerikanka iyo dalal kale ee xulufada la ah.
“Muwaadiniinta Mareykanka waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan duulimaad uga baxaan Iraq, haddii ay suurto gali weydana waa inay maraan safar dhulka ah oo ay ku tagayaan wadamada kale” ayaa lagu yiri war ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Baqdaad.
Iran ayaa wacad ku martay inay qaadidoonto tilaabooyin ay ugu aar gudayso saraakiisheeda looga dilay gudaha dalka Iraq, waxaana Maraykanku haatan galay feejignaan culus oo ka baaxad weyn tii sanadihii danbe ay iskugu jireen Iran.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kala diray mid ka mid ah guddiyada Galmudug
Aqalka Sare oo guddi u magacaabay sharciga doorashooyinka